တပ်ရင်းမှူးတစ်ဦး မောင်တောတောင်ပိုင်းတွင် တန်စိုးလက်ဆောင်များ လက်ခံမှုများရှိနေဟုဆို | ngalone
← ငခူရရွာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
မောင်တောနယ်စပ် အစွန်အဖျား ကျေးရွာများတွင် ဆရာမများအစား ဆရာများဖြင့် အစားထိုးမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆရာများကို အခြေခံစစ်ပညာ သင်ပေးမည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ပြောကြား →
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက်နယ်စပ်ကို တပ်မတော်သားအများအပြားက အသက်ပေး ကာကွယ်နေချိန်တွင် မောင်တောတောင်ပိုင်းတွင် တာဝန်ကျနေသော တပ်ရင်းမှူး တစ်ဦးသည် ဘင်္ဂလီများထံမှ တန်စိုး လက်ဆောင်များ လက်ခံယူနေကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ တစ်ဦးက ဖုန်းဆက်ပြီး နိရဉ္စရာသို့ အကြောင်းကြားသည်။
ယခုကဲ့သို့ အကြောင်းကြားခြင်းမှာ ၎င်းဒေသတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဘူးသီးတောင်ရဲတပ်ရင်းမှ ရဲသားများနှင့် တပ်မတော်သားအချို့မှ မကျေနပ်၍ ပြောဆိုနေရာမှ သတင်းဌာနသို့ သူ့အနေဖြင့် ဖုန်းမှ တစ်ဆင့် အကြောင်းကြားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပိုင်း မြင်းလွှတ်မှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ဘူးသီးတောင် အခြေစိုက် ××× တပ်ရင်းက တပ်ရင်းမှူး ××× ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မျက်စိရှေ့မှာ ငွေလက်ခံတာကို မြင်ပါတယ်။ မြင်းလွတ်က ဘင်္ဂလီတွေဆီကငွေကို လက်ခံတယ်။ ဆရာတို့ ရေဒီယိုက လွှင့်သလို ဒီမှာ ကင်းလှည့်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြင်းလွှတ်မှာ အထိုင်ချပြီး လာဒ်ငွေတွေကို လက်ခံနေပါတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ငွေတွေကို လက်ခံပါသလဲဟု မေးမြန်းရာ သူက “ အခု ကုလားတွေနဲ့ နားလည်မှု ယူပြီး ငွေတွေကို လက်ခံပါတယ်။ သူတို့ကို မဖမ်းမဆီးရအောင် ဘင်္ဂလီတွေက နားလည်မှုနဲ့ ငွေတွေ ပေးပါတယ်။ ဘူးသီးတောင်က ရဲတပ်ရင်းက ရဲသားတွေလည်း ပြောပါတယ်။ စစ်သားတွေလည်း ပြောပါတယ်။ ပထ၀ီ မြေပြင်ကို မဆင်းဘဲ အထိုင်ချပြီး အဲဒီတပ်ရင်းမှူးက ငွေတွေကို ယူနေပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာအား ညှိးနွမ်းအောင်ပြုလုပ်နေသူ တပ်ရင်းမှူး၏ လုပ်ရပ်ကို အထက်လူကြီးများ သိရှိရန် သတင်းတင်ပေးရန်နှင့် လုံခြုံရေးအရ တိုင်ကြားသူ သူ့နာမည်အား သတင်းတွင် ထည့်မရေးရန် ပြောဆိုပြီး ဖုန်းချသွားခဲ့သည်။
သူ၏ တိုင်ကြားချက်ထဲတွင် တစ်ခြား နောက်ထပ် ဘင်္ဂလီကျေးရွာတစ်ခုမှလည်း ငွေလက်ခံကြောင်း ပြောဆို သော်လည်း ဖုန်းထဲမှ ရွာနာမည်မှာ မသည်းကွဲသဖြင့် မဖော်ပြလိုက်တော့ပါ။ ၎င်းပြင် တပ်ရင်းနံပတ်နှင့် နာမည်သုံးလုံးပါ တပ်ရင်းမှူးနာမည်အတိအကျကို ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သော်လည်း နိရဉ္စရာမှ အဆိုပါ တိုင်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အတည်ပြုချက်ရရန် ခက်ခဲသဖြင့် ယခုသတင်းထဲတွင် တပ်ရင်းမှူး အမည်အား မဖော်ပြလိုက်တော့ပါ။
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← ငခူရရွာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား